Maxaa ka jira in saraakiil Al-shabaab ah ay wada hadal kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa ka jira in saraakiil Al-shabaab ah ay wada hadal kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya?
Warar hoose oo soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in saraakiil sare oo ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay wada hadal kula jiraan dowladda federaalka Soomaliya, kadib markii madaxweyne Farmaajo uu sheegay inay la hadlayaan cid walbo oo weli Soomaalinimada ku dambeyso.
Xog ay si hoose u heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaysa in saraakiishaan oo tiro ahaan gaaraya 6 ay dowladda la hadlayaan, waxaana ay kasoo goosan doonan dhanka Al-shabaabka ku sugan gobolka Shabellaha Dhexe.
Sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka, magaciisana aynu kusoo gaabinnay X.N.M, ayaa inoo sheegay in saraakiishaan ay dhawaan dhanka dowladda soo geli doonaan, walibana marka la baahiyo magacyadooda ay dad aad u aqoonsan doonaan, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Sidoo kale sarkaalkaan ayaa sheegay in ay jiraan ciidamo badan oo isku soo dhiibi doona dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo kamid ah Al-shabaab, balse ciidamadaan inooma sheegin inay la socdaan saraakiishan iyo in kale.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa horey u sheegay iney wada hadal la galayaan cid walbo oo weli Soomaalinimada ku dambeysa, isagana soo baxaya Al-shabaab.